RSS EDT 4:45
• सद्भावना पार्टीसँगको वार्ता सकारात्मक दिशामा • यस्ता छन्, अखिल क्रान्तिकारीका स्ववियु अध्यक्षका उम्मेदवार • चुनावको मिति घोषणामा विलम्ब गर्नुहुँदैन : आचार्य • स्ववियु निर्वाचन दलित र मधेसीसहितको समावेशी हुने • चार दलीय संयन्त्र खारेज गर : थापा • नक्कली विवरण दिइ नागरिकता लिन खोज्ने पक्राउ • चुनावको मिति तोक्न कानुनी अड्चन फुकाउन बाँकी : ओली • नेपाली सेनाका प्युठ दीपक थापामगरको सहादत • हामी चुनाव र वार्ताको विरोधी होइनौँ : महासचिव थापा • कांग्रेसलाई बहुमत दिन कोइरालाको आग्रह • निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सबैसँग आग्रह : नेता सिंह • अध्यक्ष रेग्मी र एनेकपा माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच छलफल ﻿
Links Exchange	Archive
सत्ता छाडेपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले अब कस्तो रणनीति अँगाल्ला?
जनविद्रोह - 69% / 191 Votes
फेरि सत्तामै - 22% / 62 Votes
प्रतिपक्षको भूमिका - 9% / 24 Votes
एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी सङ्ख्या किन घट्दै गएको होला ? - 15/06/2012
प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरूङले माओवादी लडाकूको समूहगत समायोजन हुनसक्दैन भनी दिएको अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ? - 16/03/2010
अबको ३ महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना कति छ ? - 24/02/2010
उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले पटक-पटक सरकार परिवर्तनको कुरा गरिरहनुले के संकेत गर्छ? - 10/02/2010
भारतसँग भएका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि पुनरावलोकन/खारेज गर्नुपर्ने माग कस्तो लाग्छ? - 19/01/2010
भारतले बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दबाब दिएको भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइले के सङ्केत गर्छ? - 12/01/2010
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नोबेल पुरस्कारका लागि गरिएको सिफारिस कस्तो लाग्यो ? - 26/12/2009
माओवादीको तीनदिने बन्दले कसलाई फाइदा पुग्यो होला ? - 22/12/2009
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि हातपात गर्ने कृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगममाथि किन कारबाही नभएको होला? - 17/11/2009
नेपाली नेताहरुको बढ्दो भारत भ्रमणले के सङ्केत गर्दछ ? - 11/11/2009
नागरिक सर्वोच्चताका लागि भन्दै माओवादीले थालेको आन्दोलनबारे के भन्नुहुन्छ? - 03/11/2009
आफू सरकारमा गए नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ भन्ने माओवादीको भनाइ कस्तो लाग्यो? - 27/10/2009
काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना कत्तिको छ? - 06/10/2009
पूर्वयुवराज पारस जालीनोट तस्करीमा संलग्न रहेको भन्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमको दावी कस्तो लाग्यो? - 08/09/2009
उपप्रधानमन्त्री नपाएर सुजाता कोइराला भारत भ्रमणमा नगएको भन्ने समाचार कस्तो लाग्यो? - 25/08/2009
दूताबास नै नभएको ठाउँमा राजदूत तोक्ने सरकारको निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? - 11/08/2009
हिन्दीमा लिएको शपथ बदर भएपछि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति कस्तो लाग्यो? - 29/07/2009
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएकै हो त? - 02/07/2009
सत्ता छाडेपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले अब कस्तो रणनीति अँगाल्ला? - 18/06/2009
मधेसी जनअधिकार फोरमभित्र पटकपटक भइरहने झडप र कुटाकुटले कस्तो सङ्केत गर्छ? - 10/06/2009
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छोरी सुजातालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनुको अर्थ के होला ? - 05/06/2009
दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुलाई कसरी लिनुभएको छ? - 26/05/2009
माओवादीले सदन अवरूद्ध गरेको घटना तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? - 19/05/2009
अबको नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्नुपर्छ ? - 11/05/2009
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बहाली गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ? - 05/05/2009
प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने सरकारको तयारी कस्तो लाग्छ? - 22/04/2009
पूर्व युवराज पारस शाहले दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति तपाइँलाई कस्तो लाग्छ ? - 03/04/2009
माओवादी सुध्रिए माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनसक्ने काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भनाइ कस्तो लाग्यो ? - 24/03/2009
नेपाली सेना सरह जनमुक्ति सेना पनि राष्ट्रिय सेना हो भन्ने माओवादी भनाइ तपाइंलाई कस्तो लाग्छ ? - 16/03/2009
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको एक महिने भारत भम्रणको रहस्य के हुनसक्छ ? - 09/03/2009
एमाले नेता केपी ओलीले चक्रब्यूहमा फसाएर आफूलाई हराएको भनी दिएको अभिव्यक्ति तपाइँलाई कस्तो लाग्यो ? - 28/02/2009
अमेरिकी ग्रीनकार्ड पाएको नेपालीलाई राजदूत नियुक्त गर्न नेपाल सरकारले गरेको सिफारिसलाई के भन्नुहुन्छ ? - 15/02/2009
जनमुक्ति सेनाको दिवसमा राष्ट्पतिलाई निमन्त्रणा गर्ने माओवादीको चालवाजी कस्तो लाग्यो ? - 06/02/2009
नेपाली सेनाले भर्ना प्रक्रिया रोक्नैपर्छ भन्ने रक्षामन्त्री बादलको अड्डी तपाइलाई कस्तो लाग्यो ? - 31/01/2009
नेपाल-भारतबीचको सीमा समस्या कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्यत्र नभएको भन्ने परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवको भनाइ कस्तो लाग्यो ? - 24/01/2009
सत्तामा रहेर बिद्रोह गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति तपाइलाई कस्तो लाग्छ ? - 16/01/2009
पशुपतिनाथ मन्दिरका भारतीय भट्ट पुजारीलाई माओवादी सरकारले हटाउनु ठीक थियो कि थिएन ? - 09/01/2009
प्रधानसेनापतिलाई पदबाट हटाउनु कत्तिको उचित हो ? - 02/01/2009
Whose stance do you think is right on Voluntary Disclosure of Income Source (VDIS)? - 17/12/2008
तोकिएको समय भित्र संविधान बन्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनु हुन्छ? - 01/12/2008